Bandhigga Carwada ee 128-aad waxaa lagu qaban doonaa internetka bisha Oktoobar | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn blog News Bandhigga Carwada ee 128-aad waxaa lagu qabanayaa internetka bisha Oktoobar
Taariikhda ： 2020-09-21 Qeybaha ：News Muuqaalada ： 1,925 aragti
Kal-fadhiga 128-aad ee Canton Fair (Shiinaha Soo Dhoofinta iyo Dhoofinta Carwada) ayaa lagu sii wadi doonaa khadka tooska ah iyada oo ay jirto xakameynta cudurrada faafa. The Shuangye ebike(Hotebike) waxay ku martiqaadeysaa dadka xiiseynaya baaskiil koronto ama mootada korantada, iyo macaamiishayada wada shaqeynta inay ogaadaan wax badan oo naga mid ah oo si qoto dheer u qulqulaya barxaddan. Haddii aad xiiseyneyso nooc kasta oo baaskiil koronto ah, fadlan farriin noo dhaaf. Sidaa darteed Bandhigga Carwada ee 128-aad waxaa lagu qaban doonaa khadka tooska ah laga bilaabo Oktoobar 15-keeda ilaa 24-keeda muddo 10 maalmood ah.
Shuangye Ebike Canton Fair Homepage xiriiriye:https://ex.cantonfair.org.cn/pc/en/exhibitor/4ab00000-005f-5254-0d4c-08d7ed7a1bdb/
Xiriirinta tooska ah ee tooska loogu tabinayo:https://ex.cantonfair.org.cn/pc/en/exhibitor/4ab00000-005f-5254-0d4c-08d7ed7a1bdb/live
Taariikhda Caddaalad ah: Oktoobar 15th -24th, 2020
Baaskiil koronto oo magaalada A5AH26 ah
Mashiinka: 48v 500w matoor aan burush lahayn
Batariga: 48v 10ah / 13ah batari lithium
Qalabka: Xidhanka 160
Taayirada: 26 ″ * 1.95 / 28 ″ * 1.75
Gear: 7/9/21 geerka
Xawaaraha Heerka: 35-40km / h
Range kasta khidmad kasta: 40-60km
A6AH26 buurta elektaroonigga ah
Batariga: 48v 10ah / 13ah baytari la saari karo
Load Max: 100-150kgs
Wakhtiga lacag bixinta: 5-7h
Nalka hore ee baabuurta: 3W nalka hore ee korontada oo leh dekedda amarka USB
A6AH20F taayirrada dufanka leh mootada korantada
Nalka hore ee baabuurta: 3W LED isagunala soo hadal Dekadda ku amraya USB
Qalabka gadaal: Birta
A6AH26F baaskiil koronto koronto oo dufan fiican leh
Naqshada: Aluminium Alloy 6061
Mashiinka: 36v / 48v 500w matoor aan burush lahayn
Batariga: 36v / 48v 10ah / 13ah batari lithium qarsoon
Qalabka: Xidhanka 180
Xawaaraha Heerka: 30-35km / h
Isbedelka safarka: 100mm
A1-7 isku laaban baaskiil koronto koronto leh
Jir: Daawaha aluminium isku laab
Mashiinka: 36v 250w matoor aan burush lahayn
Batariga: 36v 10ah / 13ah baytariga qarsoon
Iftiinka hore: Nalalka 3W LED oo leh dekadda korantada USB
A1-8 isku laabida mooto koronto
Mashiinka: 36v 250w / 350w matoor aan burush lahayn
Baytariga: 36v 6.6ah / 8ah / 10ah
Qaabka: Aluminium aluminium
Biriigu: bareeg koronto + jejebiyey durbaanka
Nalka hore: 3W iftiinka LED-ga oo leh dekedda amarka USB-ga
Range halkii lacag: 30-50km
Load Max: 80-100kgs
Shuangye (Hotebike) waxaa la aasaasay 2006 waxayna leeyihiin 14 sano oo khibrad soo saarista baaskiil koronto ah OEM & ODM. Oo waxay ku taallay magaalada xeebta quruxda badan ee Zhuhai, Shiinaha (Dhul Weyn). Shirkadda Shuangye waxay ku qalabeysan tahay xarumo taxane ah oo casri ah oo qumman, iyada oo noo oggolaaneysa inaan soo saarno oo aan horumarinno batteriga, mootada, kantaroole, xeedho, jir, xarun iyo daaweynta dusha qeybahan muhiimka ah. Alaabtayada ugu muhiimsan waa baaskiil koronto, baaskiil buur koronto leh, isku laabashada baaskiil koronto, xirmo beddelaad baaskiil koronto iyo batariga baaskiil koronto. Waxaan sidoo kale leenahay koox xirfadlayaal ah R & D iyo koox iibin heer sare ah si ay u siiyaan wax soo iibsade wax soo saar tayo sare leh iyo adeeg. Dhammaan alaabooyinka si madax bannaan ayaa loo baaray loona horumariyey waxayna leeyihiin waxqabad deggan iyo qiimo jaban. Shuangye wuxuu had iyo jeer ku dhegan yahay fikirka ah "daacadnimo, feejignaan, degganaansho iyo hal-abuurnimo", oo ku aaddan adeeggaaga u heellan. Waxaan kugu sugi doonnaa Carwadda 128-aad ee Kanton oo waxaan rajeyneynaa inaan ganacsi kula yeelano bogga internetka ee Carwada.
Haddii aad xiiseyneyso mid ka mid ah baaskiilada korantada ee kor ku xusan, ha ka waaban inaad farriintaada hoos uga tagto. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan baaskiil koronto, fadlan booqo annaga Websiteka rasmiga ah.
Tags:128th canton fair bandhig baaskiil koronto
Ka hor: Sida loo doorto baaskiil motori ku iibinta tusaha iibka
Next: Shuangye khadka tooska ah wuxuu toos uga socdaa Bandhigga Carwada ee 128-aad